Hooyada Kylian Mbappe Oo Beenisay War Laga Baahiyay Wiilkeeda
HomeWararka CiyaarahaHooyada Kylian Mbappe oo beenisay war laga baahiyay Wiilkeeda
May 6, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Kylian Mbappe hooyadiis ayaa beenisay in wiilkeeda uu heshiis kordhin u sameeyay kooxda haatan ee Paris Saint-Germain.
Mustaqbalka xiddiga reer France ayaa wali ku sii jira hawada marka aynu ku soo dhawaano suuqa kala iibsiga xagaagan, iyada oo weeraryahanka haatan uu heshiiska ku joogo Paris uu dhacayo bisha June.
Real Madrid ayaa lasheegayaa in ay 23-sano jirkaan ka dhigatay bartilmaameedkooda 1-aad ee ay ku doonayaan in ay si xor ah ugu dhaqaaqaan dhamaadka xilli ciyaareedkan, laakiin Mbappe ayaan wali go’aansan halka uu mustaqbalkiisu ku dambayn doono.
Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii Le Parisien ay soo warisay Khamiistii in weeraryahanka uu ogolaaday in laba sano oo dheeraad ah loo kordhiyo kooxda heysata horyaalka Ligue 1, Mbappe hooyadii, Fayza Lamary , ayaa u sheegtay warbaahinta Spain ee Marca in wararka aysan run ahayn.
Markii wax laga weydiiyay wararka xanta ah ee ku saabsan dib u cusbooneysiinta PSG, Mbappe hooyadii ayaa u sheegtay Marca : “Gabi ahaanba waa been in Kylian uu cusbooneysiiyey.”
Los Blancos ayaa kalsooni ku qabta inay ku qancisay Mbappe inuu u dhaqaaqo Bernabeu ka hor xilli ciyaareedka 2022-23, inkastoo ay sii socdaan wararka xanta ah ee sheegaya in ciyaaryahankii hore ee Monaco laga yaabo inuu weli go’aansado inuu sii joogo caasimada Faransiiska.